China COVID-19 Antibody / Antigen Detection Kit ndị na-emepụta ihe na ndị na - eweta ya Yinye
Ngwaahịa a dabara maka nchọpụta qualitative nke COVID-19. Ọ na-enye aka na nchoputa nke ibute ọrịa na akwụkwọ akụkọ coronavirus.
Ngwaahịa a dabara maka nchọpụta qualitative nke COVID-19 / Influenza A / Influenza B na Sputum / Stool samples. Ọ na-enye aka na nchoputa nke ibute ọrịa na nje ndị dị n'elu.
Ihe nnwale ahụ nwere akara ule abụọ:
N'ime otu n'ime ha, akwa conjugate agba burgundy nwere Novel coronavirus recombinant envelopu antigens jikọtara ya na Colloid gold (Novel coronavirus conjugates), 2) akwa nitrocellulose nke nwere akara ule abụọ (IgG na IgM) na akara njikwa (akara C1) .
Na warara nke ọzọ, ihe nlele ule ahụ nwere akụkụ ndị a: ya bụ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, mpempe reagent, membrane mmeghachi omume, na mpempe akwụkwọ na-adọrọ adọrọ. The reagent pad nwere colloidal-gold conjugated na monoclonal-alụso ọrịa ọgụ megide nucleocapsid protein nke SARS-CoV-2; mmeghari akpụkpọ ahụ nwere ihe mgbochi nke abụọ maka protein nucleocapsid nke SARS-CoV-2. A na-edozi eriri ahụ dum n'ime ngwaọrụ plastik. Mgbe agbakwunyere ihe nlele ahụ n'ime ihe nlele ahụ nke ọma, conjugates a mịrị amị na mpempe akwụkwọ reagent na-agbaze ma kwaga ya na ihe nlele ahụ. Ọ bụrụ na antigen SARS-CoV-2 na-enye ihe nlele ahụ, a ga - ejide ihe mgbagwoju anya dị n'etiti conjugate anti-SARS-2 na nje ahụ site na mgbochi anti-SARS-2 monoclonal antibodies ndị etinyere na mpaghara nyocha (T). Enweghị usoro T na-egosi nsonaazụ na-adịghị mma. Ije ozi dị ka usoro nhazi usoro akara uhie ga-egosi na mpaghara akara akara (C2) na-egosi na agbakwunyela olu nke ezigbo ihe nlere na ịmị akpụkpọ ahụ emeela.
N'ihi Antibody nchọpụta ：
Mkpa Mbara Ọbara
Maka nchọpụta Antigen:
Plelele mmịpụta tube
Nke gara aga: COVID-19 / Influenza A / Influenza B Nchọpụta Kit
Osote: COVID-19 IgM / IgG Ihe Nchọpụta Antibody (Gold Gold)